साहित्यले दोस्रो पुस्ताका प्रवासीलाई नेपाल चिनाउन मद्दत गर्छ - Karobar National Economic Daily
साहित्यले दोस्रो पुस्ताका प्रवासीलाई नेपाल चिनाउन मद्दत गर्छ
query_builderJune 28, 2017 9:55 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1578
केतुस खतिवडा लेखक (अमेरिका)
अमेरिकाको व्यस्त दैनिकीमा पनि कसरी पुस्तक लेख्न सक्नुभयो ?
मैले आफ्नो कामको समयमा नै लेखेको हुँ पुस्तक । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको म मेसिनगन, राइफल, पेस्तोल र रिभल्भर बनाउने कम्पनीमा काम गर्नुपर्दा नराम्रो लागिरहन्थ्यो । आठ घण्टे काममा चार घन्टाभन्दा बढी समय म निकाल्न सक्थें ।
मेरो काम कम्प्युटरमा सेट भएअनुसार मेसिनले काम गरेको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्ने मात्र हुन्थ्यो । मेसिनमा समस्या नआएसम्म म स्वतन्त्र थिएँ । त्यसरी कामबाट बचाएको समयलाई सुरुका दुई–तीन वर्ष नेपाली साहित्यका कृतिहरु खोजी–खोजी पढें । किताब फेला नपरेको बेला रेडियोमा वाचन गरिएका कृतिहरु सुनेँ । बिस्तारै हातहरु लेखनमा अघि सर्न थाले अनि तयार भयो ‘भूगोल र भोगाइ’ ।
प्रवासमा बसेर नेपालको भूगोल र भोगाइबारे लेख्दा कस्तो महसुस हुँदोरहेछ ?
आफ्नो देशमा भए जहाँ गए पनि, जता गए पनि आफन्त र चिनेजानेकै भेटिने । आफ्नो मातृ भाषामा मजाले कुरा गर्न पाइने, घुम्न जाँदा होस् या अफिसमा होस् या किनमेल, जता गए पनि अनौठो नलाग्ने । यहाँ भने ठ्याक्कै विपरित । जता गए पनि एक्लै भएजस्तो लाग्ने, जहिले पनि मनबाट केही न केही हराइरहे जस्तो लाग्ने । धेरैको माझमा पनि एक्लै भएजस्तो लागिरहने ।
दिनमा कैयौं पटक नेपालको प्रसंग जोडिएर आइरहने । तर ‘भूगोल र भोगाइ’ लेख्दा भने मलाई कहिले पनि अमेरिकामा छु जस्तो लागेन । रातको समयमा मेसिन गन र राइफल परीक्षणका भयंकार आवाजको माझमा पनि म कहिले बरेटारको भिरमा बुटा समाउँदै हिँडिरहेको हुन्थें भने कहिले औंसीको रातमा राँको बालेर देउसी खेल्न नाकाम गाउँतिर गइरहेको हुन्थें ।
मलाई त्यहाँ को–को छन् र के–के गरिरहेका छन् भन्ने मतलब हुँदैनथ्यो । मध्यरातमा कामबाट फर्कंदा कहिले स्मृतिका रमाइला क्षणहरुका तरंगले रमाइरहेको हुन्थें भने कहिले निरसिला दिनका सम्झनाले बोझिलो भएको हुन्थें ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुमा पठन संस्कृति कस्तो छ ?
अमेरिकामा पठन संस्कृतिको विकास जति हुनुपर्ने हो, त्यो मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन । मुख्य कुरा त धेरैलाई पढ्ने समय नै छैन । मैले काममा लेखपढ गर्ने जुन समय पाएँ, त्यो संयोगले मात्र पाइएको हो ।
दोस्रो कुरा, पठन सामग्रीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन् । केही वर्षयता भने प्रवासमा पठन संस्कृतिको विकास राम्रै भइरहेको देखिन्छ । अनलाइन र सोसल मिडियाहरुमा पनि प्रशस्त पाठ्य सामग्रीहरु भेटिन्छन् अहिले ।
नेपालबाट आउनेहरु नेपालीमार्फत पनि नेपाली साहित्यका समकालिन कृतिहरु मगाएर पढ्नेको संख्या बढ्दैछ । अमेरिकामा पनि लेखकको संख्या बढ्दै नै छ ।
हरेक नेपाली विदेश पुगेपछि लेखक बनिहाल्छन् । प्रवासमा बसेर मुलुक छाडेको पीडामात्र लेख्ने कि स्तरीय साहित्यमा पनि जोड दिने ?
हरेक नेपाली विदेशमा पुगेपछि लेखक बनिहाल्छन् भन्नेचाहिँ छैन । हो, आफ्नो देश, जन्मस्थान र आफन्तको सम्झनामा तरंगिएर कृतिको रूपमा केही लेखिएका छन् । अनि सबैले मुलुक छाडेको पीडामात्र लेखेका छन् भन्ने पनि छैन ।
भिन्न शैलिमा उपन्यास, कथा संग्रह तथा कविता संग्रह पनि लेखिएका छन् । अर्को कुरा, मुलुक छाडेको पीडा पनि जिवन्त प्रस्तुत गरिएको छ भने, पाठकलाई लेखकले बाँधेर राख्न सकेको छ भने, स्तरीय लेखन शैली छ भने के त्यो स्तरीय साहित्य हुन्छ ।
म पनि यही भन्छु कि संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक साहित्यले नै नेपाली साहित्यको विकासमा मद्दत पुग्छ । स्तरीय लखनले पाठकको संख्या, साहित्यको विस्तार र लेखनलाई हौसला मिल्छ । लेखन व्यवसायकै रूपमा पनि फस्टाउन सक्छ ।
संख्याको तुलनामा गुणात्मक विकास किन हुन नसकेको होला ?
कुनै पनि कृति प्रकाशन गर्नुअघि उक्त कृतिको स्तर निर्धारण गर्ने कुनै मापदण्ड हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दा आफ्नो कृतिको स्तर बढाउन लेखकहरुलाई नैतिक दबाब हुन जान्छ ।
हुन त मलाई लेखनमा त्यति साह्रो गुणात्मक विकास नभए जस्तो पनि लाग्दैन । संख्याको वृद्धिसँगै लेखनको स्तर पनि वृद्धि भई नै रहेको छ जस्तो लाग्छ । लेखन भनेको त्यति सजिलो कुरा पनि होइन । स्तरीय लेखनको लागि गहिरो अध्ययन पनि चाहिन्छ । कृति निकाल्ने भन्दा पनि स्तरीय कृति निकाल्ने प्रयास लेखकले पनि गर्नुपर्छ ।
प्रवासी साहित्यलाई मूलधारको साहित्यबाट किन अलग राखिन्छ ?
प्रवासी साहित्य प्रवासमै लेखिन्छ, प्रवासकै कथावस्तुमा बढीण् केन्द्रित भएको हुन्छ र यसको मुख्य बजार पनि प्रवासमा नै हुन्छ । प्रवासी लेखकहरुले पनि आफूलाई प्रवासी भन्न रुचाएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा, प्रवासी साहित्य मूलधारमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने केही प्रवासी साहित्यकर्मीलाई पत्तो नभएको हुन सक्छ भने मूलधारका भनिने साहित्यकारले प्रवासी साहित्यलाई मूलधारमा समाहित गर्न कुनै पहल नगरेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
तर जे भए पनि प्रवासी साहित्य पनि नेपाली साहित्यको एउटै भण्डारमा भन्डारण गरिने भएकाले कहीँ न कहीँ मूलधारे साहित्य र प्रवासी साहित्य एकै भएको छ ।
साहित्य लेखनमार्फत् नेपाललाई विश्वमा चिनाउन प्रवासी नेपालीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?
साहित्य लेखनले प्रवासमा बस्ने दोस्रो पुस्ताहरुलाई नेपाल र नेपालीको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । साहित्यमार्फत नेपालका भौगोलिक बनावटको वर्णन, प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन, चाडवाड र सांस्कृतिक परम्पराको वर्णन आदिले हामीलाई अरु देशका नागरिकसँग कुरा गर्ने माध्यम बनाउँछ ।
साहित्यमार्फत जानेका कुराहरुले हामी आफ्नो देशको बारेमा मजाले कुरा गर्न सक्छौं । अझ नेपाली साहित्यका कृतिहरु सम्बन्धित देशका भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने त झनै राम्रो हुन्छ ।
अमेरिका प्रवास साहित्य